Erdogan: weerarkii lagu qaaday goobta lagu caweeyo ee Istanbul... | Universal Somali TV
Erdogan: weerarkii lagu qaaday goobta lagu caweeyo ee Istanbul ujeedadiisu waxay tahay in dalka laga abuuro fowdo
January 01 2017 16:13:47
Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkii goobta lagu caweeyo oo ay ku dhinteen in ka badan 39 qof, isagoo sheegay in Turkey ay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray argagixisada iyo kuwa taageera "ilaa dhamaadka".
Erdogan ayaa soo saaray fariin qoraal ah ka dib weerarka xarunta Reina ee magaalada Istanbul iyadoo booliska ay wali raadinayaan ninka ka danbeeyay weerarka.
"Waxa ay ka shaqaynayaan in ay burburiyaan mooraalka dalkeena iyo in ay abuuraan fowdo iyagoo si ula kac ah beegsanayo nabada qarankeena iyo dadka rayidka ah, kuwaas ee weerarada foosha xun," ayuu ku sheegay bayaanka Erdogan .
Isagoo u tacsiyadeeyay kuwa naftooda ku waayey, oo ay ku jiraan "ajanabiga shisheeye," ayuu yiri Erdogan "Turkey way sii wadi doontaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo gabi ahaanba waxa naga go'an inaan sameeyno wax kasta oo loo baahan yahay si loo hubiyo ammaanka iyo nabadda muwaadiniinta iyo gobalka ".
Kan-xigaBahrain: Rag hubeysan oo maxaabiis k...
Kan-horekooxda Trump oo doonayo inay ku marti...
34,195,655 unique visits